२ प्रतिशत ब्याज छुट दिन राष्ट्र बैंकको निर्देशन, कसले पाउने पाउने छन् यस्तो सुविधा ? « Artha Path
२ प्रतिशत ब्याज छुट दिन राष्ट्र बैंकको निर्देशन, कसले पाउने पाउने छन् यस्तो सुविधा ?
प्रकाशित मिति : १६ बैशाख २०७७, मंगलवार
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कोरोनाले प्रभावितहरुलाई ऋणीको ब्याजदरमा २ प्रतिशत छुट दिन निर्देशन दिएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई राष्ट्र बैकले छुट दिन निर्देशन दिएको हो । मंगलवार पत्र जारी गर्दै २ प्रतिशत छुट दिन निर्देशन दिएको हो ।
चैत मसान्तसम्मको कायम ब्याजदरमा चौथो त्रैमास अर्थात वैशाख, जेठ र असारको ब्याजमा छुट दिन राष्ट्र बैंकले बताएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार यो सहुलियत पाउन कोरोनाबाट प्रभावित भएकै हुनुपर्नेछ । तर यो सहुलियत सबै ऋणीहरुले भने पाउने छैनन् ।
कसले पाउने छैनन् यो सुविधा
खाद्य उद्योग, ट्रेडिङ, एलपी ग्यास, इन्टरनेट, टेलिभिजन, टेलिकम्युनिकेसन, साबुन तथा केमिकल उद्योग, मेडिकल पसल, सञ्चालनमा रहेका हाइड्रोपावर कम्पनी, सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरा उद्योगले यो सुविधा पाउनबाट बञ्चित रहेका छ ।
कसले पाउने छन् यो सुविधा
होटल, रेष्टुरेन्ट, ट्रेकिङ, पर्यटन क्षेत्र, हवाई उड्डयन तथा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र र निर्यात उद्योगहरुले यो सुविधा पाउने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित क्षेत्रहरुका लागि कर्जा लगानी गरेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले भने ३ प्रतिशत ब्याज छुट दिन निर्देशन दिएको हो । होलसेल कर्जा लगानी गर्ने लघुवित्तहरुको हकमा भने २ प्रतिशतमात्रै छुट दिन राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
२० अर्बको ट्रेजरी बिल खरिद गर्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल खरिद गर्ने भएको छ
गोर्खा इको प्यानल र पोखरा विन्ध्यवासिनी ट्रेर्डसवीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर
काठमाडौं । पोखरा र त्यस आसपासका क्षेत्रमा गोर्खा इको प्यानलको विक्रीवितरण पोखरास्थित पोखरा विन्ध्यवासिनी ट्रेर्डसबाट
थप २८० जनामा कोरोना संक्रमण, २ जनाको ज्यान गयो
काठमाडौं । बुधबार पछिल्लो २४ घण्टामा थप २ सय ८० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको
केएफसीको तेह्रौ शाखा हेटौडामा
काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय फुड चेन ब्रान्ड केएफसीले नेपालमा तेह्रौ शाखा बिस्तार गरेको छ । हेटौडा
सिटिजन्स बैंकद्वारा ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नगद हस्तान्तरण
सूची दर्ता गर्ने बारेमा सूचना
युवामै नाडाको अध्यक्ष भएर अटोमोवाइल्स क्षेत्रमा केही गरेर देखाउने विचार…